कछुवा गतिमा छपाई—निरन्तरको हैरानी, ९ लाखले कहिले पाउने स्मार्ट लाइसेन्स ? – Mission Khabar
कछुवा गतिमा छपाई—निरन्तरको हैरानी, ९ लाखले कहिले पाउने स्मार्ट लाइसेन्स ?
मिसन खबर ३ असार २०७६, मंगलवार १८:४२
काठमाडौं—चालक अनुमतिपत्रका लागि आवेदन दिएका साढे नौ लाख सेवाग्राहीले चालक अनुमतिपत्र पाउन बाँकी छ । सरकारलाई बुझाउनुपर्ने राजश्व रकम तिरेको एक वर्ष नाघेका यति धेरै सेवाग्राहीले चालक अनुमतिपत्र नपाएका हुन् ।
सरकारले स्मार्ट चालक अनुमति पत्र वितरण सुरु गरेको चार बर्ष पुग्दा पनि समस्या उस्तै छ । कतिपयले त सुरुवाती समयकै लाईसेन्स पाएका छैनन । देशभरका सबै यातायात व्यवस्था कार्यालयबाट परीक्षा उत्तीर्ण गरेकाका चालकको अनुमतिपत्र छपाइ यातायात व्यवस्था विभाग एक्लैले गर्दै आएको छ । सेवाग्राहीलाई सहज र छिटोछरितो सेवा सुविधा दिन भन्दै यातायात कार्यालय विस्तार गरिएपनि खासै सुधार देखिएको छैन । बरु विस्तार भएका यातायात कार्यालय अनियमितता लेनदेनको अखडा बनेको गुनासो बढिरहेको छ । विभागमा रहेको मुद्रणयन्त्र (छपाइ मेशिन) को क्षमताभन्दा धेरै कार्ड छाप्नुपर्ने भएकाले सेवाग्राहीले समयमा चालक अनुमतिपत्र नपाएको यातायात व्यवस्था विभाग बताउँछ ।
विभागमा अहिले नौ वटा उपकरण भएपनि छ\_सात वटाले मात्रै नियमित काम गरिरहेका छन् । एउटा उपकरणको क्षमता दैनिक दुई हजार ५ सयदेखि तीन हजार वटासम्म छपाइ गर्ने छ । यसरी हेर्दा विभागले एक दिनमा बढीमा १८ हजारसम्म स्मार्ट कार्ड छपाइ गर्छ । गत फागुनसम्ममा विभागले देशभरका कार्यालयमार्फत ५ लाख ५७ हजार २९८ स्मार्ट चालक अनुमतिपत्र वितरण गरेको थियो । आर्थिक वर्ष २०७४\_७५ मा २ लाख ९८ हजार १७५ चालक अनुमतिपत्र वितरण गरेपनि माग अनुसार छपाई नहुदा अभाव यथावत छ ।
यही गतिमा छपाइ गर्दा यहाँ छाप्न बाँकी रहेका लाखौं चालक अनुमतिपत्रको छपाई समस्या यथावत रहने निश्चित छ । स्मार्ट चालक अनुमतिपत्र छपाइमा ढिलाइ हुँदा सेवाग्राही हैरान भएका छन् ।